Ma Dildilaacii Kulmiyaa Mise Guushii Kulmiye: Bal Maxaa Ka Dhacay Madasha Sideese Wax U Dhaceen Aan Is Weydiinee? Dahir A. Jama | Somaliland.Org
August 27, 2008	Waxa lasoo sheegayay muran, khilaaf iyo shirkii golaha dhexe ee Kulmiye oo rag ka cadhoodeen. Waxan arkayay faalooyin iyo qoraalo iyo waraysiyo faalooyin la xidhiidha dhacdadaas iyoo raggaas shirkii ka baxay iyo qaar kaleba kasoo yeedhaya. Waxyaabaha iga yaabiyey ee maskaxda bina aadamku u baahan tahay inay fahanto oo aanan ku arag waraysiyadaas iyo faalooyinkaas waa yadoo lagu lafa gurayo waxii madasha ka dhacay iyo siday wax u dhaceen.
Horta la yaab ma laha oo marka hore dhacdadaas UDUB iyo waxa ay cagaha ku jiidato sidii ay rabaan ayay is yidhaahden uga faaideysta. In kale oo fekerka maskaxdoodu u saamaxi waayayna tii ay ahaydna meel ayay la dul fadhiisteen. Haddaba bal waxaan rabaa inan in yar oo ku kooban waxa dhacay oo aan faalo lahayn aan halkan kusoo qaato, si aan u yaqiinsano ama u fahano dil dilaaca Kulmiye ee lagu hamiyayo inuu dhab yahay iyo in kale.
Haddaba arrimaha ama dhacdooyinka inta kor ku xusan waa xaqiiqadii dhacday oo aan faalo lahayn. Bal imika iyo haatan aan isku dayo hadaba in yaroo faalo ah sababaha ay xanaaqa badan ka muujiyen marka aan ka gudubno xaqiiqoyinka aan kor kusoo xusay.
Waxa la sheegaya in guddomiyaha xisbiga Kulmiye Muj Silanyo uu taagerayashisa u sheegay in isagu shakhsiyan taagersan yahay murashaxa Cabdiraxman Saylici, kaasoo uu aaminsan yahay inuu cod ka keeni karo gobolka Awdal. Cabdiraxman Aw Cali iyo Dhegaweyne iyo Cadami waxay ku doodayan in Silanyo sidaa yidhahdo ma ahayn. Hadaba ninka doorashada u taagan ee la dooranaya waa Md Silanyo ee mar haddii uu isagu gacantiisa kusoo xulan kari waayay madaxweyne ku xigeenkisa sida Rayale ba sameeyay ama sida dimuqraadiga addunka ka dhacda (Maraykanka oo kale) ma khaladbaa in uu yidhaahdo aniga taladaydu waa taas.
Sawirkan ama khilaafkan waxaad moodaa mid u muuqda oo la leeyahay Guddomiye Silanyo adigu murashaxa iska ahow laakin in aad guulaysato iyo in kale iyo sidii lagu guulaysan lahaa anaga ayaa ka talinayna ee adigu talo kuma lihid, haddiiba aan doono aan ku ridno ama ku guulaysiinee. Ma tahay taasi mid macquul ah?
Aakhirkii iyo gebagebadii qolyaha UDUB ee rajaynaya ama ku taamaya dil dilaaca Kulmiyena waxaan leeyahay, salaada iyo ducada badsada. Hadalkii Axmed Cadami shalay kasoo yeedhay ee BBC ma ahayn mid munaasib ah. Sidaas darteed Mujahid Cabdiraxman’na waxaa la gudboon, maadama uu dalkan hore uga soo ahaa Madaxweyne Ku Xigeen, masuul culusna yahay in uu xaaladda dejiyo, labada dhinacna caqliga dib u kaashadaan.